China Nyoro PVC Penzura Toppers fekitori uye vagadziri | SJJ
Penzura ndidzo zvishandiso zvekunyora, kudhirowa kana kugadzira zvisikwa, zvinyoro nyoro zvePenzura maturu midziyo yekushandisa kunyora kwako, kudhirowa kwako uye zvisikwa zvako zvinakidze uye zvakakwana.
Penzura zvishandiso zvekunyora, kudhirowa kana kugadzira zvisikwa, zvakapfava PVC penzura toppersndiwo maturusi ekuti uite kunyora kwako, kudhirowa kwako uye zvisikwa zvako zvinakidze uye zvakakwana. Kwete ivo chete vana asiwo vanhu vakuru vanofarira zvinoyevedza manhamba ayo akagadzirwa nemukurumbira makuru mabhurani saDisney nevamwe. Yedu yakapfavaPVC penzura toppersinogona kugadzirwa mune aya akanaka manhamba mune akasiyana saizi, maumbirwo uye mavara. Ivo anoshandiswa sekusimudzira zvipo, zviyeuchidzo, kushongedza, kushambadzira uye zvichingodaro. Iwo madiki akapfava ePV toppers akashambadza akakurumbira mweya mweya zvakanaka, uye chengetedza mapenzura uye mushandisi zvakare. Mimwe yakapfava PVC penzura toppers ine eraser basa. Ivo vanobatsira vashandisi kuchenesa iko kunyora, kudhirowa uye chero zvisikwa zvakanaka kwazvo, uye voita kuti zvive zvakakwana.
Maumbirwo, magadzirirwo uye hukuru nevatengi zvinogamuchirwa. Isu tichagadzira fekitori mifananidzo yekutendera yako usati waita sampuli kana kugadzirwa, edza zvakanakisa kuratidza iwo iwo ruzivo nehunyanzvi mazano, uye kushandira kune rimwe bhizinesi kune isu tese.
Motifs: Kufa Yakarohwa mu yakazara 3D, magadzirirwo uye saizi inogona kuve yakagadzirirwa.
Kupedzisa: Logos inogona kudhindwa, yakashongedzwa, Laser yakatemerwa zvichingodaro
MOQ: 500 hrs pakugadzira
Pashure: Nyoro PVC Fridge Magnets
Zvadaro: Nyoro PVC Menduru
3D Penzura Topper
Ruvara Penzura Grips
Tsika TPR Topper
PVC penzura toppers